Nahoana aho no tokony hampiasa lohan-tsindrim-baovaon'ny Amazon ho an'ny fanatsarana ny lisitry ny lisitra?
Amin'izao fotoana izao, miaraka amin'ny fitomboan'ny isan'ny olona mandray ny fandraharahana ara-barotra amin'ny Amazon, dia misy ny fifaninanana ara-barotra tena marina amin'ny vokatra vokarina any. Ary lasa zava-dehibe ny hahatonga ny pejy vokarinao hita bebe kokoa amin'ny fikarohana. Izany no mahatonga azy io tsy ho vita mihitsy ny hivelomana ho mpivarotra mahomby raha tsy mifidy fitaovana fampiasa amin'ny teny malaza Amazon sy fitaovana fikarohana (na rafitra an-tserasera) - casetta plastica bimbi. Saingy alohan'ny zavatra hafa dia manolo-kevitra ny hanomboka amin'ny fianarana aho. Nahoana no tena manan-danja ny teny fototra tianao? Eny, andeha hojerentsika.
Inona ny Amazon Keywords?
Tahaka ny amin'ny fitaovam-pikarohana lehibe (toa an'i Google, sy Yahoo, Bing, sns. ), mila manana fitaovana enti-manamboatra am-pahamendrehana Amazon ianao mba hahafantarana ireo teny, fehezanteny na fehezanteny izay tena mety hampiasaina rehefa mijery ireo vokatra azo amidy any. Amin'izany fomba izany, ny taham-pikarohana fohy dia toa anisan'ireo fotodrafitrasa voalohany mampiseho (mazava ho azy, ho toy ny tombantombana mivaingana) hoe firy ny olona mampiasa ny teny fototra na fitenenana lava vava hahitanao ny zavatra tadiaviny.
Nahoana no mampiasa loharanon-tserasera amin'ny Amazon?
Ireto misy antony vitsivitsy hahafantaranao ny manan-danja indrindra amin'ny fananganana ny tenimiafon'ny ambaratonga fototra Amazon sy ny fitaovana fikarohana. Farany, ilaina ny fisafidianana ny teny fanalahidy mety hitranga:
Ampiasao ny vokatrao mety ho an'ny mpanjifa rehetra mety hividy amin'ny Amazon. Raha atao tsotra izao, miaraka amin'ny teny fanalahidy mety tafiditra ao amin'ny lisitry ny vokatrao, dia ho mora kokoa ny mitady olona hitady ny vokatrao - amin'ny alalan'ny fanatsarana ny tarehimarika tadiavina an-tserasera amin'ny sehatra / sokajy fikarohana.
Mamandrika fitaovam-pitaterana tranokala mifandraika kokoa - mivantana any amin'ny pejin-tranonkala / tranonkala. Midika ve izany fa ny fananana laharana tsara ho an'ny teny fototra na fikakarana fikarohana lava dia mahatonga ny algorithm A9 hahita anao. Amin'izany fomba izany, mety hahatonga anao haingana kokoa ny fifamoivoizana amin'ny fivarotana vokatra bebe kokoa amin'ny fitomboan'ny isan'ireo olona mikaroka ny singa mifanaraka na mitady ao anatin'ny sokajy mitovy.
Aiza ny fampidiran-teny?
Amin'ny ankapobeny, ny teny fototra tianao ho fantatra dia natao hampiasaina ao anatin'ny fampielezan-kevitra fanentanana anao amin'ny famokarana. Ary avelao hiatrika izany - Ny fanamafisana ny pejy momba ny vokatrao dia ny fitadiavam-bola tsy an-kijanona, maharitra sy mahomby. Fa raha vonona sy vonona ny hampiasa vola ianao ao anatin'izany fotoana izany, dia ho afaka hanao zavatra ara-bakiteny an-tserasera amin'ny Amazon ianao. Noho izany, raha vantany vao nisafidy mpamorona tenimiafana Amazon ianao - aiza no ampiasainao ny teny fanalahidy tsara indrindra miaraka amin'ireo ambim-baventy hafa sy ireo soso-kevitry ny teny fanalahidy? Ireto ny fizarana lehibe ao amin'ny pejin-tranonkalanao misy lisitra mba ho tsara kokoa noho ny teny fanalahidy tianao:
Lohatenin'ny pejy momba ny vokatra (toerana tsara indrindra hametrahana ny teny fototrao fototra amin'ny latsa-danjany).
Fizarana ny famariparitana vokatra (natao indrindra indrindra ny fametrahana ny teny fanalahidinao amin'ny teny lava).
Lisitry ny bala (raha ny marina, dikan-teny fohy kokoa ny famaritana momba ny vokatrao, fa aoka ho azo antoka fa tsy manana teny fanalahidy ianao miverimberina ao amin'ny lohateninao sy ny lisitry ny bala).